Fasaxyada oo kor u kacaya iyo dhaqaale liita - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ciidda midsommar Foto: SVT
Fasaxyada oo kor u kacaya iyo dhaqaale liita
La daabacay måndag 15 juni 2009 kl 15.15
Inkasta oo waddammada caalamka uu harreeyey dhaqaale xumo, ayaa haddana bulshada Iswiidhen ey dhaqaale badan gelisaa fasaxyada ey u baxaan, sida sannadkan la caddeeyey ama la saadaalineyo.
Baaritaan sannadle ah oo uu sameeyo bankiga Nordea, ayaa lagu xaqiijiyey in isku celcelin ey bulshada iswiidhen ku kharashgareeyaan fasaxooda dhaqaale gaarsiisan 14 000 oo koronka iswiidhishka ah. Waan dhaqaale kor u dhaafsiisan 9%, marka loo barbar dhigo sannadkan, sannadkii tagay ee 2008-dii.
Tobankiiba sidded ee ka mid ah bulshada waxey fasaxooda ku qaataan dalka gudihiisa, hase yeeshee hawada roobabka leh ee dalka saameeysey horraanta xilliga kuleeylaha ey sababtay iney kor u kacdo sannadkan fasaxyada loo aadayo dalka dibaddiisa, waa marka loo bar bar dhigo sannadkii tagay ee 2008. Sidoo kale waxaa caddaatay iney sii kordhayaan safarrada loo tago waddammada ka baxsan carriga xubnaha ururka midowga Yurub, sida waddammada Turkiga iyo Tuuniisiya.
Ururka dalxiiska Iswiidhen, marka magaciisa la soo gaabiyana loo yaqaan STF, ayaa sidoo kale bilaabay qorshe loogu tala galay gabdhaha da’da yar ee asal ahaan ka soo jeeda dalka dibaddiisa sidii koox koox iyaga oo ah ey dalka ugu socdaali lahaayeen, waxa loo yaqaan (vandra). Muhiimmadda arrinkaa ayuu ururku ku macneeyey sidey fikirradooda ku gaarisiin lahaayeen dadyoowga asal ahaan ka soo jeeda dalka dibaddiisa.